Webtalk Nyocha (Ego n'ime 💰) 2020 - 💌 WebTK - Ticket gị WebTalK 🚀 Kpọọ, Nyochaa, Akụkọ & ọzọ 🔥
Webtalk Nyocha (Ego n'ime 💰) 2020
Is Webtalk kwesịrị oge gị? Ọ bụ atụmatụ Ponzi ọhụrụ ka ọ bụ ezigbo ohere? Legit ka ọ bụ ojoro? Mana Nke mbu, gini ka bu Webtalk?
Webtalk bu ihe omuma ohuru ndi ozo. Ọ bụ ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke na-ekere òkè na Facebook, LinkedIn, na Amazon. Dị ka mkpali, ọ nwere mma Mgbakwunye mmemme, ma nke a bụ nanị ọnụ mmiri iceberg maka ọhụrụ a mụrụ mgbasa ozi ọha mmadụ.
New!: ya na mwepu nke Ad Pool Rewards, ugbu a mmadụ niile nwere ike irite ego ụgwọ maka njikọ aka ha na Webtalk. Ọkachasị, Webtalk bụ mgbasa ozi mgbasa ozi mbụ na-akwụ gị ụgwọ ọrụ na-akparaghị ókè maka ọrụ gị, ntinye aka nke ndị na-eso ụzọ gị na ọrụ nke ntụnye gị.
The Webtalk enwere mmepe nke ndi otu mmepe nke oma maka ihe dika 8 afọ ugbu a. E wepụtara atụmatụ ya na nkebi, ikpughe ihe niile ọhụụ nke ikpo okwu.
Mgbe Webtalk Eweputara Beta na July 2018, ọnụọgụ ndị ọrụ abawanyela ụba, ma rue mbido Machị 2020. Webtalk emeela ihe banyere 4 nde ndị ọrụ na nyocha nke beta.
Ndị ọrụ kwuru na Webtalk bụ ụzọ iji hụ na njikọ dị elu karịa ụfọdụ usoro ntanetị mgbasa ozi. Maka ọtụtụ ndị ọrụ, ọ bụ ụzọ ị ga-esi kesaa data nke na-abụghị nke ugbu a na-enye site na mgbasa ozi ọhaneze.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta Webtalk akaụntụ, ọ ga-adị mma ịgbaso usoro ndị a:
Fastzọ kachasị ngwa ngwa ma baa uru bụ isonyere ndị Webtalk Stars Team, n'ihi na ọ ga-atụkwasị ọtụtụ uru gị Webtalk ndi otu, dika a Ego ndi mmadu nke 50% maka ndu (Nke ahụ bụ ego gị!). Iji sonyere na Webtalk Stars Team, pịa Ebe a ma ọ bụ banye “STAR” mgbe a jụrụ gị onye kpọrọ gị.
Ozugbo ị nwetara njikọ ịkpọ oku gị, pịa njikọ ahụ maka ibe ndebanye.
Dejupụta aha gị, adreesị ozi-e, akara ekwentị, na ọmụmụ ụbọchị.
Wee pịa na abanye.
Iji kechie usoro ntinye aka, ị ga-akwado adreesị ozi-e gị
Ịlele data kọntaktị gị ga-ekwenye na ị na-ekwu na Email ị nyere, nakwa na e zitere gị ozi data gị, a ga-emezi nkwenye a ozugbo.
Aha gị n'ezie ka a choro maka ndebanye aha ka nke a na-eme ka ndị mmadụ na-ejikọta ọnụ ma na-abawanye uru. Enwere ike machibido aha njirimara ụfọdụ iji nyere aka mee ka onye ọ bụla site na ịmepụta ihe ndekọ phony ma ọ bụ nke aghụghọ.
Ugbu a, ka anyị lee ụfọdụ n'ime Webtalkihe omuma di iche iche:
Ụfọdụ Akụkụ ọhụrụ nke Webtalk
Ị Pụrụ Inwe Webtalk Hazie Ndị Nchọta Gị na Otu
Na Facebook, a gaghị enye gị ohere ịhapụ ndị ezinụlọ, ndị enyi, na kọntaktị ọkachamara. Facebook na-edebe onye ọ bụla n'ime kọntaktị gị na otu ụdị, nke nwere ike iwe iwe ma ọ bụrụ na ị bu n'obi ịkọwa foto ezinụlọ gị na kọntaktị azụmahịa gị.
At Webtalk ị nwere ike ịhazi ndetu gị dị ka ndị enyi, ezinụlọ ma ọ bụ ọkachamara, ya mere site na nkewa a, i nwere ike ime Webtalk yiri Facebook - maka ndị ezinụlọ gị na ndị enyi gị - na Linkedin - maka gị na kọntaktị gị - n'otu ebe.
Ịnwere ike ịga n'ihu ịkọtụrụ azụmahịa gị n'ihu ahịa na onye ahịa, onye mmekọ, onye na-ahụ maka ọrụ, onye ọrụ ibe yana ndị ọzọ. I nwekwara ike ịhazi ndetu gị na aha ndị nwere ike ịchọta.
Ị nwere ike na Webtalk Na-achịkwa Akụkọ Gị Isi Iyi
Na Facebook, a gaghị ekwe gị ijikwa akụkọ ozi gị, n'oge na-adịbeghị anya, ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke mgbasa ozi na-ejikọta na Facebook newsfeed. Ihe ọ bụla ị na-ekere òkè na oge nke Facebook gị bụ onye ọ bụla n'ime ndị enyi gị, ma ọ bụrụ na ị na-egosi onye nwere ike ịhụ ya na onwe ya.
na Webtalk na ozi ọma a na-emetụbeghị, ị nwere ike ịkekọrịta ọrụ gị ndị ọzọ na-eme naanị ka ndị enyi gị, ndị ọrụ azụmahịa na-azụ ndị ahịa gị, ihe ndị metụtara azụmahịa na ndị mmekọ, wdg.
Ịnwere ike ịgụnye mkpado ndị ọzọ, nweta ihe osise vidio - jiri ụdị nhazi ndị ọzọ dị iche iche ọ bụ kpọmkwem ihe ị chọrọ ịhụ.
Nke a bụ ebe ọ na-atọ ụtọ, karịsịa ma ọ bụrụ na ị nọ n'elu ikpo okwu maka ebumnuche azụmahịa ma ọ bụ iji nweta ọrụ ị chọrọ. Ị kwesịrị ị rịba ama na njirimara njikọ nke usoro ihe omimi a dị ọhụrụ jikọtara ya na njirimara nke a ezigbo ngwugwu ụgwọ.
Ị nwere ike ịnọ na-eche ihe atụmatụ dị mkpa ka a kpọọ gị "ihe adịchaghị" na ikpo okwu a mgbe anyị kwuchara ihe ndị dị iche iche jikọtara na ikpo okwu a nke a na-adịghị ahụ na ntanetị ndị ọzọ. Ihe oyiyi dị n'okpuru ebe a na-egosi n'ụzọ doro anya ihe atụmatụ ndị dị oke mkpa ga-enye:
Rịba ama na ọnụahịa maka onye nnọchiteanya bụ ihe dị ka ọkara nke LinkedIn nke na-eme ka ọ bụrụ asọmpi.
Ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ na Development
Webtalk kọrọ na nso nso a na a na-emepe ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ. Ulo ikpo okwu a di ugbua na ule beta, a na-ekwuputa ihe omuma ohuru nke ndi mmadu 3 nde nke May 2019. Akụkụ nke ihe ndị a gụnyere:
NEWSROOM (ụlọ ọrụ ndị ọrụ)
SOCIALCPX (Ntuziaka ụgwọ ọrụ njikọ mmemme)
Webtalknke mgbasa ozi onwe onye mgbasa ozi
Webtalk Peeji maka ndị na-eme egwuregwu & azụmahịa
Webtalk Nyocha - njirimara Ntụkwasị Obi Nzuzo nke Eluigwe wuru na blockchain
Onwe - ngwá ọrụ iji ree oge gị Webtalk profaịlụ
Ụlọ ahịa - ngwá ọrụ iji ree ngwaahịa na ọrụ site n'aka gị Webtalk Page
The Webtalk Ụlọ ahịa, kwadobere site na ntinye aka na-echere sayensị ịchọ - ịchọta ma were onye ọ bụla ọrụ / ụlọ ọrụ ma ọ bụ zụta ngwaahịa ọ bụla site n'aka ndị ọrụ kwadoro na netwọk gị
ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ...
Webtalk Mmekọrịta Mgbakwunye - SocialCPX kọwara
Webtalkndị na - eme ntọala kwere nkwa na ha ga - ekere òkè na ọkara nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ha na ndị ọrụ ha site na mmemme mgbasa ozi ọhụrụ na nnukwu ego a na - akpọ SocialCPX. Ndị mmekọ beta bụ ndị ruru eru maka usoro mmemme kachasị elu (ihe a na-akpọ "1 nde bonus") ga-enweta 10% nke ego nke ọgbọ 5 mepụtara site na netwọk ozi ha ruo mgbe ebighị ebi. Ndị mmadụ ga - esonye mgbe Beta ga - emechi ga - enweta 10% ego ha na - enweta site n'aka ha naanị ha.
Ị nwere ike ịlele ego gị nwere ike iji nke a ihe omumu ego ugwo maka Webtalk. Ị ga-amata na ị nwere ike Webtalk enweta ọtụtụ puku dollar kwa ọnwa naanị site n'ịkpọ ndị 20 ka ha nweta netwọk.
Ị na-agba gị ume isonyere n'oge beta iji ruo eru maka ohere mmekọ 5-tier. Nke a doro anya bụ otu n'ime Webtalkihe kacha mma maka asọmpi ahụ.
Ụfọdụ Pros na Cons banyere Webtalk:
Ihe nke Webtalk
O nweere onwe ya isonye.
The Webtalk a na-etolite ikpo okwu site n'inwe ọtụtụ ahụmahụ na njirimara nke onye ọrụ gosipụtara.
I nwere ikike pụrụ iche iji jiri ikpo okwu rụọ ọrụ maka onye ọ bụla.
Ị nwere ike ijikwa ihe ị hụrụ na-ahụ.
Onye guzobere na-arụsi ọrụ ike n'elu ikpo okwu ma na-enye nkuzi vidiyo na posts iji nyere ndị ọrụ ọhụrụ aka.
Ị nwere ike isonye na Webtalk Mgbakwunye mmemme - SocialCPX - n'efu. Uru ogologo oge nke 10% na-eketa oke site na ọkwa 5 maka ntinye (maka ndị mmekọ beta) bụ onyinye mmesapụ aka na ọnụ ahịa bara uru. Ọtụtụ ndị otu MLM dị ugbu a ga-akwụ ụgwọ ọnwa kwa ọnwa iji nye gị ohere ịnweta mmemme dị otú a.
Mkpa nke Webtalk
Ọ ka dị na Beta Mode, na mmegharị a anaghị egosi kpọmkwem ihe ị nwetara na nsụgharị ikpeazụ.
Uzo igodo di ole na ole adighi n'ime akwukwo Beta.
Ọ na-esiri ike ịkọ ma ọ bụrụ na usoro a na-elekọta mmadụ ga-abụ ihe mmezu mgbe emechara - ọ ghaghị ịbanye na ahịa asọmpi na ụfọdụ nhazi ndị nwere ike ịlụ ọgụ.
Is Webtalk Ezigbo ma ọ bụ Scam?
Webtalk enwere uru 2 karịa Facebook, Google+, Pinterest, na usoro ntanetị dị iche iche na-eme ka ọ bụrụ ihe dị ịrịba ama na n'ezie:
1 bara uru:
Mgbe ịkekọrịta foto, posts, wdg na Facebook, ndị enyi gị niile nwere ike ịhụ ha. Cheedị banyere ọnọdụ ebe enwere foto ole na ole ị chọrọ igosi naanị ezinụlọ gị, ọ dịghịkwa mkpa ka onye njikwa gị hụ, ma eleghị anya, enwere ozi ndị ị chọrọ ịkọrọ ndị mmekọ azụmahịa gị nke ị na-adịghị mkpa ka ndị ezinụlọ gị lee. Nke ahụ bụ ihe ị nwere ike imeta Webtalk.
2 bara uru:
Ọ bụ ihe a maara nke ọma na Facebook na Google na-enweta ọtụtụ ijeri dollar site na mgbasa ozi na nhazi ha, n'enweghị akụkụ ọ bụla e kenyere ndị ọrụ ha.
A tụlere ihe niile, ị na-eme nri (yana posts na foto ndị ị na-ekerịta) na okporo ụzọ (mgbe ị kpọbatara ndị enyi gị na gị n'elu ikpo okwu ma ọ bụrụ na ndị mmadụ 'dịka' gị posts), n'enweghị ntinye aka gị nyocha ihu ọha, a gaghị enwe nnọkọ nke ndị mmadụ iji kpọsaanụ. Otú ọ dị, ị nweghị ihe ọ bụla! Ọ bụghị otu ntụpọ! Ya mere, ị na-arụ ọrụ maka ihe ọ bụla! Webtalk e mere iji ghọta ma kwado okwu a kpọmkwem.
On Webtalk, mgbe ị nabatara onye dị ka onye ị na-akpọ, ị kpọtụrụ ya / ụdị nke njikọ, ọ / ya nwere ebe (ezinụlọ, onye na-arụkọ ọrụ, ndị enyi, wdg).
Na mkpokọta, mgbe ịkekọrịta otu post, ị nwere ike ịlele ụdị nke ndị mmadụ ga-ebute na data a na nke a.
Ònye Bụ Webtalk Ntọala?
Webtalk Ndị edemede bụ RJ Garbowicz (CEO), Andrew Peret, Basit Hussain, Jeff Catherell na Jamie Pews.
Banyere Ndị Ntọala
Dabere na ya na ibe ya, RJ Garbowicz bụ onye nchoputa, onye isi na onyeisi oche nke Webtalk, nke o hiwere na 2011. RJ bụ ọrụ maka ịtọ ntọala ngwaahịa na nduzi maka ụlọ ọrụ ahụ. Ọ na-eduzi imewe na mmepe nke Webtalkna ngwaahịa na ọrụ.
RJ bụ onye na-achụ nta ego na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ anọ nke mbụ na ụlọ ọrụ abụọ. Ọ mụtara nyocha weebụ na St Petersburg College ma jeere mba ya ọrụ dị ka onye ọrụ radar technician maka Nchedo Ngwá Agha IL.
Nke a bụ ihe mere Webtalk e kere ... ekwu banyere RJ Garbowicz:
"Ihe m na-eme ná ndụ bụ itinye aka dị ukwuu n'ịgbado ịda ogbenye n'ụwa na enweghị ụgwọ ọrụ na-enyere aka ịmepụta ndụ ka mma maka ụwa.
Webtalk bụ ngwá ọrụ iji kwe ka mụ onwe m na ndị ọrụ anyị rụọ ọrụ a site n'inye ndị ọchụnta ego na ndị ọkachamara ihe ndị ọzọ iji mepụta ihe ịga nke ọma n'usoro zuru ụwa ọnụ.
Webtalk na-enyekwa anyị oge na ihe onwunwe (10% niile Webtalk uru) iji nyere ụwa aka ịmalitewanye ụlọ ọrụ ndị na-abụghị ndị na-aba uru site na Webtalk Ntọala (lee anya n'okpuru maka nkọwa) "
Ọ bụ eziokwu ndị a Webtalk na-agbalị ịbụ Facebook, LinkedIn, na Amazon tinyere ọnụ.
Webtalk bụ azịza maka atụmatụ ndị anyị na-agụsi agụụ ike, mana ndị na-ahụ maka ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi na-agọnahụ ya. Ntughari uzo a na-ejikọta ihe dika ihe di iche iche nke ahia di iche iche na ahia ndi mmadu n'ime uzo. Ọzọkwa, ịbanye na ikpo okwu a ga-achọpụta na ị ga-arụ ọrụ ma ọ bụrụhaala na ị na-ekere òkè na mmemme nlekọta ya.
Ya mere, olee ihe ị chere gbasara ikpo okwu a? Hapụ gị ihe n'okpuru ...
Emelitere ikpeazụ July 6, 2020
Is Webtalk kwesịrị oge gị? Ọ bụ atụmatụ Ponzi ọhụrụ ka ọ bụ ezigbo ohere? Legit ka ọ bụ ojoro? Mana nke mbu, kedu ihe ọ bụ Webtalk?
Otu Ngwa: elekọta mmadụ media
Categories Webtalk Nyocha Tags Mgbakwunye ahịa, Bitcoin, Ọrụ nchịkọta Blog, Ebe nrụọrụ weebụ, Nnyocha nke Facebook, Digital ahịa, Digital media, Facebook, LinkedIn, Microsoft, Outlook.com, Nbudata foto, Pinterest, mbanye, Ntughari ozi, Oha obodo, elekọta mmadụ media, Ọrụ netwọk mmekọrịta, Social netwọk, Dollar US, weebụsaịtị, Webtalk, Webtalk beta, World Wide Web Hapụ ikwu Mail igodo
SCDA TOGO: I choro n'ezie a Webtalk ibe! 😍
Mgbe Ndị Ọrụ gachara: ịchọrọ n'ezie Webtalk ibe! 😍
Home - Webtalk Nyocha - Webtalk Nyocha (Ego n'ime 💰) 2020